Earphones / Earbuds – Tagged "Earbuds" – ICT.com.mm
QCY T5 Pro Wireless Bluetooth Earbuds (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Portable Earphones: small in design, easy to carry, and is equipped withacharging box, which can be charged anytime, anywhere, simple and convenient. Sports Earphones: wireless...
Sony WF-C500 Truly Wireless Headphones (Orange)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ DSEE restores high frequency sound and fine fade-out sound lost in compression Fine-tune your sound using the Sony | Headphones Connect app 10hr long battery life, total...
Hoco S11 Melody Wireless Headset (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ BT specification: V5.0 AB1536P. Battery: 400mAh (charging case), 35 mAh (single headset). Calls / music time: 3.5 hours (80% volume). Standby time 200 hours. Weight: single 3g....
Hoco S11 Melody Wireless Headset (Black)
Singtech T1 EarBuds (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Bluetooth Version: V5. 1+EDR+BLE Rated Voltage: 5V/500 mAh Working Time:3Hours Battery Capacity: 30mag Earbuds/300mah Box Working Distance: 25M-30M
JBL UA True Wireless Flash X-Engineered Waterproof True Wireless Sport Earbuds
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: UAJBLFLASHX Bluetooth Version: 5.0 Ear tip material: Silicon Driver Size (mm): 5.8 Driver Sensitivity at 1kHz/1mW (dB): 96 Dynamic frequency response range (Hz): 20 Hz – 22...
WK Design V9 TWS Gaming Bluetooth Earbuds
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: PC+ABS Blueooth Version: V5.0 Transmission Distance: 10m Phone call time: 6h Standby time: 120h Charging time: 1-2h Battery Capacity: 400mah Product Weight: 26g Code: 10030046
WK Design TWS-V36 Earbuds (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: PC+ABS Bluetooth version: V5.1 Speakers: 10mm Phone call time: 4h Rated Power: 5mW Charge way: Type-c Weight: 160 g Code: 10030045
WK Design TWS-V36 Earbuds (Gray)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: PC+ABS Bluetooth version: V5.1 Speakers :10mm Phone call time: 4h Rated Power: 5mW Charge way: Type-c Weight:160 g Code: 10030045
WK Design V5 TWS Bluetooth Earbuds
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: V-5 Code: 10030039 Color: Black
WK Design BD800 TWS Wireless Earbuds (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: BD800 Version: 4.2 Playing time:4Hours Standby Time: 100 Hours Charging Time :2Hours Special Features: ‎Wireless Microphone Form: Factor ‎Built-In Headphones Form Factor:...